अन्तर्वार्ता - UrjaKhabar
सूर्य अधिकारी, बाराही हाइड्रो पावर पब्लिक लिमिटेडका अध्यक्ष एवं इञ्जिनियर हुन् । उनको डेढ मेगावाटको ठेउले खोला जलविद्युत आयोजना अहिले सञ्चालनमा छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको जलविद्युत–संवादः देश त अन्धकारबाट मुक्त हुँदैछ भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ? – हाम्रो स्रोत भनेकै जलस्रोत हो । नेपाल अब अन्धकारमा…
काठमाडाैं- प्रबलराज अधिकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन दुई वर्षअघि गठन भएको कम्पनीले देखिने गरी काम भने सुरु गरिसकेको छैन । नीतिगत व्यवस्था नहुँदाको कारण कम्पनी अघि बढ्न सकेको छैन, तर अधिकारी संरचनादेखि व्यापारिक योजना निर्माणसम्म कम्पनी…
तेह्रथुम पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार डाँगी पछिल्लो एक दशकदेखि जलविद्युत विकासमा संलग्न छन् । २०६५ सालमा स्थापना भएको कम्पनीले अहिले ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला निर्माण गरिरहेको छ । निर्धारित समयभन्दा ४ महिनाअघि विद्युत उत्पादन गर्न उनी अहोरात्र खटिएका छन् । आयोजनाको पछिल्लो अवस्था र निजी क्षेत्रका समस्यामा केन्द्रित…
विद्युत नियमन आयोग पदाधिकारीले बुधबार पद तथा गाेपनीयताकाे सपथ लिएका छन् । विद्युत विकास विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिल्लीबहादुर सिंह आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । उनीसँग ऊर्जा खबर ले गरेकाे संक्षिप्त कुराकानी : लामो अन्योलताबीच आयोगले पूर्णता पाएको छ । यहाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको छ । अब कसरी काम सुरु गर्नुहुन्छ ? आजको दिनसम्म…
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यही वैशाख १९ गते हुने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनका सम्बन्धमा नेविप्रा राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका संयोजक रामेश्वर पौडेलसँग ऊर्जा खबरले गरेकाे कुराकानी : आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको व्यस्तता कति छ ? निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा भइपछि पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा केही अन्योलता थिए । विभिन्न घटनाक्रम विकसित भए। निर्वाचनलाई तोकिएकै…
बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को सहायक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ यस क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेको छ । २०६६ साल असारमा स्थापना भएको कम्पनीले सयभन्दा बढी आयोजनामा काम गरिसकेको छ । तेस्रो मुलुकमा समेत काम गरेकाले कम्पनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानसमेत बनेको छ । कम्पनीको सक्रियता, स्वदेशी तथा विदेशी आयोजनामा काम…
जलविद्युत् विकासमा लगानी सम्मेलन आवश्यक
निजी क्षेत्रको हाइड्रो भिलेजले निर्माण सुरु गरेको म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना (५७ मेगावाट) को प्रबन्ध निर्देशक हुन् सुशील पोखरेल। काठमाडौंमा शुक्रबारदेखि दुई दिने लगानी सम्मेलन हुँदैछ। यही सन्दर्भमा ऊर्जा विकास परिषद्का कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका उनीसँग नेपालमा आयोजना हुँदै गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलन, ऊर्जा क्षेत्रमा यसको महत्व र आवश्यकताको विषयमा राजु बास्कोटाले गरेको…
जल तथा ऊर्जा आयोग सन् १९७५ मा स्थापना भएको संस्था हो । जलस्रोत तथा ऊर्जाको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्थाले व्यवहारतः काम गर्न भने सकेको छैन । आयोगको स्थायी सचिवालयको रूपमा सन् १९८१ मा ‘जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स) गठन गरियो । जलस्रोत तथा ऊर्जाका विषयलाई मिहिनरूपमा…
‘३५ वर्षपछि निजी क्षेत्रका आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता बढेको छ’
जलविद्युत विकासमा स्थापित व्यवसायी हुन्, बटु लामिछाने । उनले दुई दशकदेखि विदेशबाट इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण आयात तथा जडान सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका छन् । अहिले उनी आफैं दर्जनौं आयोजनाका प्रवर्द्धक भइसकेका छन् । लामिछाने प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा ४० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनामा जोडिएका छन् । यस क्षेत्रको अनुभव, समस्या तथा चुनौती…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत बैशाख २५ गते विद्युत क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति समेटिएको श्वेतपत्र जारी गर्यो । यसमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका दर्जनौं कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । समस्या समाधानका उपायसमेत किटान गरिएको छ । हरेक नागरिकलाई जलविद्युतको मालिक बनाउने भनिएको छ । तर,…